AMISOM oo bilowday barnaamij tababar ah oo ku saabsan xuquuqda aadanaha ee ciidamada ammaanka Soomaaliya – Walaal24 Newss
Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM) ayaa bilaabay barnaamij tababar ah oo loogu talagalay saraakiisha Ciidamada Ammaanka Qaranka Soomaaliyeed si loo hagaajiyo heerka ay u hoggaansamayaan Sharciga Caalamiga ah ee Xuquuqda Aadanaha.
Tababarka, oo looga golleeyahay inuu kor u qaado aqoonta saraakiisha ammaanka ee ku saabsan arrimaha xuquuqda aadanaha, ayaa lagu fulin doonaa shanta dowladood ee xubinta ka ah federaalka.
Koorsadan koowaad ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, halkaas oo 30 askari oo ka tirsan Ciidamada Qaranka Soomaaliya, Ciidamada Booliska Soomaaliyeed, Hay’adda Sirdoonka Qaranka iyo Amniga Qaranka, Wasaaradaha Xuduudaha iyo Dawladaha xubinta ka ah Federaalka, dejinta sharciyada caalamiga ah iyo qalabka xuquuqda aadanaha.
“Barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay dadaalka wadajirka ah ee Boqortooyada Ingiriiska iyo la-hawlgalayaasheeda si ay u taageeraan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubinta ka ah federaalka, si loo hubiyo in la ilaaliyo amniga gudaha ee Ciidamada Qaranka Soomaaliya, xuquuqda caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, sida caadiga ah iyo heerarka, “Ku-xigeenka Safiirka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya, Mary Shockeye, ayaa sheegay intii lagu jiray xidhitaanka tababarka xuquuqda aadanaha ee saddexda maalmood ah.
Ms. Shockledge ayaa sheegay in barnaamijku uu la socdo fikradda AMISOM ee dhawaan la ansixiyay, kaas oo tilmaamaya tababbarka Ciidamada Dowlada Federaalka ee xuquuqda aadanaha mid ka mid ah hawlaha muhiimka ah ee la qabto inta lagu gudajiro xilliga kala guurka.
Ku xigeenka Wakiilka Gaarka ah ee Guddoomiyaha Komishanka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Simon Mulongo, ayaa ku boorriyay SSF in ay ilaaliso xuquuqda aadanaha marka ay la macaamilayaan dadka rayidka ah.
“Waa inaan u muujinnaa dadka Soomaaliyeed in aan bixinno rajo wayn, sidaa darteed lama barbar dhigi karo kooxaha argagixisada ee doorbida inay sinnaan iyo sharci darro,” ayuu yiri Mr. Mulongo.
Simon Mulongo waxay ku boorisay ka qaybgalayaashu in ay wadaagaan aqoonta ay ka heleen asxaabtooda ku sugan gobollada federaalka.
Fikradda ku saabsan natiijada tababarka, Khabiirka Xuquuqda Aadanaha ee AMISOM, Ulrike Kahbila Mbuton, ayaa sheegay in ka qaybgalayaashu ay xaliyeen in ay abaabulaan tababar la mid ah beelahooda iyo goobaha shaqada.
“Tababarkani wuxuu ka caawiyay dhismaha awooddeena. Waxa uu yimid waqtigii saxda ahayd markii aan isku diyaarineyno in aan qabano mas’uuliyadda amniga ee waddankeenna taas oo micnaheedu yahay inaan u hoggaansamno xuquuqda aadanaha, “ayuu yiri Maxamed Cabdulmiciik Maxamed, oo ka mid ah kaqeybgalayaasha.
Isagoo la shaqeynaya Anab Maxamuud Cusmaan, ayaa ku boorriyay AMISOM in ay kordhiso tababarka qaybaha kale ee dalka si loo kordhiyo tirada tababarayaasha xuquuqda aadanaha ee ciidamada ammaanka. Tababarka saddexda maalmood ee ay qabanqaabisay AMISOM waxaa maalgeliyay Safaaradda Ingiriiska ee Soomaaliya.
Sawiro: Dhulgariir qasaare geystay oo ku dhuftay jasiiradda dalxiiska ee Lombok ee Dalka Indonesia
Dowadda Imaaraadka Carabta ay booqasho rasmi ah ku tagtay magaaalada Addis Ababa ee Dalka Ethiopia
Yuusuf Dabageed oo loo magacaabay Gudoomiyaha Gobolka Hiiraan ee maamulka Hirshabeele